Dhaq dhaqaaqa Al-shabaab ayaa waxaa ay sheegeen in dagaal ka dhacay inta u dhaxeysa Bal'ad iyo Jowhar oo ka wada tirsan Shabeellaha dhexe ay ku dileen toban ka mid ah Ciidamada Burundi ee ka tirsan howlgalka AMISOM ee Soomaaliya.
War ka soo baxay Al-shabaab ayaa lagu sheegay in Ciidamada Burundi lagu weeraray agagaarka Tuulada Gololey ee ku dhow Degmada Balcad.
Xilliga la weerayay Ciidanka Burundi waxaa ay gurayeen Geedaha Jidka dhinaciisa ku yaalla iyaga oo ka baqayay in loogu soo gambado.
Al-shabaab ayaa sidoo kale sheegay in ay gubeen saddex ka mid ah Gaadiidka AMISOM oo isugu jira kuwa dagaal iyo kuwa Baldoosarrada loo yaqaan ee ay Geedaha ku xaaqayeen.
AMISOM ayaa dhinaceeda sheegtay in ay ka hortagtay weerar isku day ahaa oo ay AL-shabaab ku doonayeen in ay ka fuliyaan saldhigga Ciidanka Burundi ee Gololey halkaas oo ay dhawaan fariisin ka sameysteen.
Maamulka Degmada Balcad ayaa isaguna shalay ka hadlay weerarkaas ayaa sheegay in weerarkaas uu fashilmay islamarkaana ay AL-shabaab ka dileen afar qof.
Ma jiro ilo ka madaxbanaan labada dhinac oo xaqiijin kara waxa ka dhacay halkaas inkasta oo Al-shabaab, AMISOM iyo Maamulka Balcad ay xaqiijiyeen jiritaanka weerarkaas.